Moosajii basaastuu akkamitti beekna, akkamitti ofirraa eegna(how to know and catch spywares) - oroict.com
Home Barnoota Tekinoolojii Moosajii basaastuu akkamitti beekna, akkamitti ofirraa eegna(how to know and catch spywares)
Lafa kana irra basaastuun nama qofa miti. Moosajiileen akka namaa ta’anii nubasaasan ykn waan nuti hojjannu fi odeeffannoo icciitii dhuunfaa keenyaa guuranii qaama barbaaduuf dabarsan heddutu jira.
Moosajiileen kunneen hedduun isaanii yeroo interneeta irraa ykn yeroo interneeta fayyadamnu bifa adda addaatiin gara keenya dhufuu danda’u. Isaanis
1)Qaamni barbaadu xiyyeeffatee gara keenya erguudhaan
Qaamni barbaadu karaalee adda addaa kanneen akka teessoo ergaa(email), kallattiin interneeta irraa tessoo addaa interneeta keenyaa(IP address targeted) xiyyeeffatee nutti erguudhaan odeeffannoo barbaadu argachuu bira darbee koomputara keenya irratti maala akka hojjachaa jirruufi eenyuun akka walqunnamtii gochaa jirru adda baafachu(Remote monitoring) gochuu danda’a.
2) Interneeta yeroo fayyadamnu osoo hin beekin nutti dhufuu danda’u.
Moosajiileen akkasii bifa beeksisa toorarraa(online ads) fakkaachuun bifa bareedina qabuufi nama hawwachuu danda’uun qophaayanii kan gadi lakkifaman yoo ta’an, nutid osoo hin beekin cuqaasuu fi beeknees cuqaasuun amala maxxannee waan qabanii sirna(system) keenyatti haala salphaan qabachuu danda’u. Sana booda hojii isaanii eegaluudhaan odeeffanoo barbaachisaa sassaabee qaama dhimmi ilaallatuuf erga.
Hubadhaa: Moosajiin Basaastuun(Spyware) kun hojii isaa hojjachuuf hayyama keenya hin barbaadu.Akkasumas yeroo inni hojiisaa hojjatu ijaan hin agarru, haata’uu malee amaloota tokko tokko ni agarsiisa.
Amaloota kanneen keessaa:
~Koomputarri/Mobile keenya amala addaa agarsiisuu, amala duraan hin qabne agarra.
~Koompitarri/mobile keenya ni jaatanawa(busy).
~Koompitarri/Mobile keenya ofumaan lamkaasi(restart) ta’a
~koompitarri/Mobile keenya hojii barbaannu akka seeraan hin hojjanne godha, ni dadhabsiisa.
~Mobile irratti daataa hedduu akka fayyadamnu gochuun baasii hin taaneef nu saaxila, kunis sababa dadhabsiisuuf mobile seeraan hojii akka hin hojje waan godhuuf.
Kataa Moosajiin Basaastuun(Spyware) nutti dhufuu danda’uun keessaa muraasni:
~Suuraa/Suursagalee(photo/video) fakkeeffamee nutti ergamee Ilaaluud asi tuqi, achi tuqi nuun jechuu danda’a.
~Hidhaa(link) wajjiin nutti ergamee isin fayyadaa dubbisi jechuu danda’a.
~Wantoota kanaafi kana fakkaatu yoo bantan ammas BALAQQEE TAPHATAA(Flash Player) naqadhaa(download) jedhu nutti agarsiisuun akka nuti kana tuqnee naqannu godhee nutti seena.
Tooftaalee ofirraa ittisuuf nu fayyadan:
~Wantoota Interneeta irraa buufannu ykn naqannu filachuu- kunis wanta barbaadnu malee wantootni biraa miidhaa geessisuu danda’an akka nutti hin seenneef fayyada.
~Mosajii tokko yoo ijaarru(install) goonu waliigaltee(agrement) isaa dubbisuu. Kunis caljenneetuma gara gadii buunee mirkaneessuu(agree) jechuu osoo hin taane waa’ee maliifi maal maal akka ta’e waliigalticha dubbisuun filatamaadha.
~Beeksisa cuqaafamaa(clickable advertisement) ofeeggannoo gochuu. beeksifni akkasii yeroo hedduu mosajiilee akkanaa waan qabuuf ofeeggannoo olaanaa gochuu qabna.
~Ergaa (Email) nama hin beekne irraa nutti dhufee, hidhaa(link) banaa jedhu irraa ofeeggannoo olaanaa godhuu.
~Farra Basaastuu ka’aa(Active Anti-spyware ) qabaachuu. Yeroo tokko tokko miini(tools) tolaan qulqulleessu(anti-spyware free scan) godhu jedhamee yaadamu mataan isaayyuu basaastuu ta’ee argama. kanaaf hubannoodhaan farra basaastuu gaarii ta’e qabaachuu qabna.
Qubee Technologies and OROMO ICT Teams!
Previous articleFeesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know if your facebook is hacked and Solutions]— Kutaa 2ffaa
Next articleYeroo Koompitara irratti waa hojjannu Koompitarri akka ofumaa olkaa’u gochuu(Auto Saving Our work on computer)
Tartiiba Maqaa #Addisababa Google Map irratti jedhurraa gara #Finfinneetti akka jijjiirru nu gargaaru
Haaloobaas October 22, 2017 at 8:46 pm
Baayyee galatoomi. Anti-spyware amanamaa ta’es toora irraa argachuu dandeenyu osoo nuuf eertee!
Alfiyya February 15, 2018 at 10:45 pm
Galatomaa baay’ee gaaridha
Dhiifama Barreffama messanger hundasa si’atokkon haalakamin haquu ykn ballessu dandeenya???
Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(Disadvantage of having SMART PHONE) geechisu keechaa
Abdisa Bencha Jara - October 8, 2017
Abdisa Bencha Jara - April 24, 2017
RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA
Abdisa Bencha Jara - June 10, 2017
Total Hits : 548947